TNW (Web Service & ICT Solutions) - စီးပွားရေးလုပ်ငန်သုံး Email ဝန်ဆောင်မှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်သုံး Email ဝန်ဆောင်မှု
TNW မှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
- စိတ်ချရသော လုံခြုံမှု
- သင့်တင့်မျှတသော စျေးနှုန်း
- Downtime မရှိဘဲ အမြဲတမ်း အလုပ် လုပ်နိုင်ခြင်း
- အဝင် ၊ အထွက် Email များအတွက် လျင်မြန်သော speed
- မိမိ၏ အချက်အလက်များအား ခိုးယူရန် ပေးပို့လာသော Email များကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည့် Spam Filters
- သင်ပို့လိုက်သော Mail များ၏ ရောက်ရှိမှုအခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
- သင့်ထံ ဝင်ရောက်လာသော Mail များ၏ လုံခြုံရေးအဆင့်များကို စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
- Email နှင့်ပါတ်သက်သည့် မည်သည့် ပြဿနာမဆို အချိန်မရွေး ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်း
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို Microsoft Outlook ၊ Computer ၊ Tablet များနှင့် Mobile ဖုန်းများတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- Synchronization : ဥပမာ၊ သင်သည် သင်၏ Email Address တစ်ခုကို Computer ၊ Tablet နှင့် mobile ဖုန်း စသည့် device များတွင် အသုံးပြုပါက device တစ်ခုကနေ အခြားသူများဆီသို့ သင် ပို့လိုက်သော Email များသည် သင်၏အခြား device များတွင်ပါ အလိုအလျောက် record ထားရှိပေးနိုင်သည်။ Synchronization ကို အလိုမရှိပါကလည်း အသုံးမပြုဘဲနေနိုင်သည်။ Synchronization ကို အသုံးမပြုခြင်းသည် outlook database အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
Price MMK150,000 MMK200,000 MMK300,000 Negotiable
Extension MMK150,000 MMK200,000 MMK300,000 Negotiable
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ။
ကျနော်တို့အနေဖြင့် Google ၊ Yahoo နှင့် Hotmail ကဲ့သို့သော အများသုံး Email များကို ဝန်ဆောင်ကြေးပေးစရာမလိုဘဲ အလကား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အများသုံး Email များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကိုယ်ပိုင် Email အသုံးပြုခြင်းလောက် ကောင်းမွန် လုံခြုံမှု မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသန်းပေါင်းများစွာသည် အများသုံး Email များကို အလကား အသုံးပြုနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်ချင်းစီကို စိစစ်မှု မပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် Email များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အောက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့အနေဖြင့် အများသုံး Email တွေမှာလည်း Spam Mail တွေကို Filter လုပ်လို့ရသော်လည်း အများသုံး Email ဖြစ်နေသဖြင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Server ကနေပြီးတော့လည်း Filter လုပ်လို့ရပါသည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ပိုင် Encryption တွေလည်းပြုလုပ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပို၍လုံခြုံပါသည်။
၂. Email အမည်များ
၃. မိမိတို့ Customer များ၏ အထင်ကြီးလေးစားမှု
ကျနော်တို့အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အများသုံး Email များကို အသုံးပြုခြင်းသည် မသင့်လျော်ပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Customer များ၏ အထင်ကြီးလေးစားမှုကို ရယူခြင်းသည်သာ အကောင်းမွန်ဆုံး အလေ့အထဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များကို မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင်သနည်း။
၁။ Google က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များအတွက် Google Suite ဆိုပြီး ပြုလုပ်ပေးထားသည်။
၂။ Microsoft က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များအတွက် Office 365 ဆိုပြီး ပြုလုပ်ပေးထားသည်။
၃။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email များအတွက် ကိုယ်ပိုင် Exchange Server ထားရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုန်ကျစားရိတ်များသဖြင့် small business များအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
၄။ Webmail ကို အသုံးပြုခြင်း
Category: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး Email ဝန်ဆောင်မှု